ကုန်ကြမ်း MMAF (Hydrochloride) (1415246-68-2) HPLC≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း / MMAF (Hydrochloride) (1415246-68-2)
SKU: 1415246-68-2. အမျိုးအစား: R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ MMAF (Hydrochloride) (CAS 1415246-68-2) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
MMAF (Hydrochloride) ကဗီဒီယို
MMAF (Hydrochloride) အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: MMAF (Hydrochloride)
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 314.3 mmHg (ခန့်မှန်း) မှာကို C ° 760
စတီရွိုက်သံသရာအတွက် MMAF (Hydrochloride) အသုံးပြုမှု
MMAF (Hydrochloride) (1415246-68-2) Monomethylauristatin က F Hydrochloride, MMAF HCL လည်းမခေါ်နေသည်
MMAF (Hydrochloride) အသုံးပြုမှု
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ကဒီမှာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော, MMAF ပေါ်မှာအများကြီး reseach ပြုပါရည်ညွှန်းတချို့မှတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်:
စသည်တို့အတွက်: MMAF ဆဲလ်လိုင်းများတစ် panel ကိုဆန့်ကျင်စသည်တို့ cytotoxicity အတွက်ပြသထားတယ်။ Karpas 50, H299, 3396-O နှငျ့ Caki-786 များအတွက် IC1 တန်ဖိုးများကိုအသီးသီး 119, 105, 257 နှင့် 200 nm ဖြစ်ကြသည်။ MMAF ပိုပြီးအစွမ်းထက်အခမဲ့မူးယစ်ဆေးထက်ဖြစ်ပြီး, MMAF display ရဲ့ cAC10 conjugation လှုပ်ရှားမှုများအသံထွက်ကြောင်းပစ်မှတ်ထား။ တစ်ဦးအံအခြေခံတွင် cAC10-L1-MMAF4 ကျော်အခမဲ့ MMAF ထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက် 2200-ခေါက်ပျမ်းမျှဖြစ်ပါတယ်စမ်းသပ်ပြီးအပေါငျးတို့သ CD30-အပြုသဘောဆဲလ်လိုင်းများအပေါ်တက်ကြွစွာဖြစ်ပါသည်
Vivo ခုနှစ်တွင်: MMAF (1415246-68-2) (> 16 mg / kg) ၏ကြွက်များတွင်အများဆုံးသည်းခံထိုး (1 / ကီလိုဂရမ် mg) MMAE ထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားသည်။ cAC10-L1-MMAF4 50 တစ်ခု MTD ကြွက်များတွင် / ကီလိုဂရမ် mg နှင့် 15 ကြွက်များတွင် / ကီလိုဂရမ် MG ။ သက်ဆိုင်ရာ cAC10-L4-MMAF4 ADC ကိုအသီးသီး> 150 ၏ကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင် MTDs / ကီလိုဂရမ် mg နှင့် 90 ကြွက်များတွင် / ကီလိုဂရမ် MG ရှိခြင်း, အများကြီးလျော့နည်းအဆိပ်သင့်ခဲ့
MMAF (Hydrochloride) ရက်တွင်သတိပေး
ဒါဟာ Monomethylauristatin က F Hcl (MMAF Hcl) tubulin ၏ polymerization ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်ဆဲလ်ဌာနခွဲတားစီးကြောင်းတစ်ခု antitubulin အေးဂျင့်ကြောင်းမှတျတမျးတငျထား; နှင့် thecytotoxic လှုပ်ရှားမှု MMAE ထက်နိမ့်လျက်ရှိ၏ က antibody ကိုမူးယစ်ဆေး cytotoxin ဖြစ်ပါတယ်။
ဆဲလ်တွေစမ်းသပ်မော်လီကျူး၏အမှတ်စဉ် dilution နဲ့ကုသနှင့်ဆဲလ်လိုင်းပေါ် မူတည်. 4-6 ရက်ပေါင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးနေကြသည်။ IC50 တန်ဖိုးများကို generate မှဆယ်လူလာတိုးတက်မှုနှင့်ဒေတာများလျှော့ချရေး၏အကဲဖြတ် Alamar အပြာရောင်ဆိုးဆေးလျှော့ချရေး assay သုံးပြီးပြု
MCE လွတ်လပ်စွာသည်ဤနည်းလမ်းများများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပေ။ သူတို့ကသာကိုးကားဖြစ်ကြသည်။
ကြွက်: လေ့လာမှုအရေပြားအောက်ဆုံး Karpas 299 အကြိတ်အရွယ်အစား 300 mm3 ရောက်ရှိသောအခါအုပ်စုတစ်စုနှုန်းနဲ့သုံးတိရိစ္ဆာန်များ 10 တွေထဲကဆေးထိုး cAC10-L1-MMAF4 သို့မဟုတ် cBR96-L1-MMAF (1415246-68-2 ဖြစ်စေ၏ antibody ကိုအစိတ်အပိုင်း / ကီလိုဂရမ်ကိုယ်အလေးချိန် MG အားလက်ခံတွေ့ဆုံကြောင်းပြသ သွေးကြောသွင်း)4။ မြင်းသရိုက်အနာထို့နောက်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ထားရှိအကောင်းဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်းအပူချိန်ဝင်း၌၎င်း,5μm-ပါးလွှာအေးစက်နေတဲ့တစ်ရှူးကဏ္ဍများ immunohistochemistry အကဲဖြတ်သုံးပြီးစွန်းနေကြပါတယ်
MMAF ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို; AASraw ထံမှ Hydrochloride ဝယ်ဖို့